By WMA	 On Oct 12, 2020
Guddi ka tirsan Qaramada Midoobay ayaa sheegay, in Al Shabab ay malaayiin doolar ka hesho canshuuraha ayna dhaqaalahaas ku kaydsadaan bangiyada maxalliga ah, sida laga soo xigtay warbixin cusub oo kasoo baxday Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay.
“Adeegsiga Al-Shabab ee nidaamka bangiyada wuxuu awood u siinayaa in si dhaqso ah loogu gudbiyo dhaqaalaha,” ayaa lagu yiri warbixinta.
Warbixinta ayaa sidoo kale sharaxaad ka bixisay nidaamka maaliyadeed ee si wanaagsan loo abaabulay ee Al Shabaab iyadoo lala socdo xisaab celin joogto ah si looga hortago qasaaraha.
Marka laga soo tago kharashaadka ku baxa sirdoonka iyo militariga”Al shabaab waxay tobanaan kun oo doollar ku maal-galisay hanti iyo ganacsi ganacsi Suuqa weyn ee Bakaaraha ee magaalada Muqdisho, kaasoo iibiya badeecooyin kala duwan waana suuqa ugu weyn dalka ee furan” ayaa lagu yiri warbixinta.
Natiijooyinka la helay waxa ay cadeynayaan sida Shabaab ugu dhex milmeen bulshada Soomaaliyeed, ayuu yiri Rashiid Cabdi, oo ah falanqeeye iyo cilmibaare ku xeel dheer Geeska Afrika.
Cabdi wuxuu ku yiri wareysiga taleefoonka “Ma ahan hada kacdoon ee waa awood dhaqaale ” waa dowlad hadheysa oo canshuuraha ka qaadeysa dowlada xitaa meelaha aysan xukumin. Al-Shabaab, ayuu yiri, waxay noqonayaan “urur aad u xooggan, adkeysi leh oo xididaysan oo aan ku tiirsanaan xoog ama millatari si ay mid u sii ahaato.”
Daraasad dhowaan la sameeyay ayaa sidoo kale muujisay sida nidaamka xawaaladaha aan rasmiga aheyn ee wadanka ee xawilaaduhu ay hoosta uga xariiqayaan iibka iyo ka ganacsiga hubka sharci darada ah.
Wareysi uu bixiyay wasiirka maaliyadda Soomaaliya, Cabdiraxmaan Beileh, wuxuu qirey adeegsiga baahsan ee ay Al Shabaabku u adeegsanayaan nidaamyada maaliyadeed ee gudaha.
“Waxaan la kulannaa bangiyada waxaanan u sheegaynaa khatarta ay ku sugan yihiin,” ayuu ku yiri wareysi. in lacag lagu raro. “Kuwani waa dad aad u caqli badan oo aad u khiyaano badan,” ayuu yiri.
Kadib tobanaan sano oo dagaal ah, Soomaaliya waxa ay ku guuleysatay heer nabadeed, iyada oo u muuqata in ay dhistay hay’ado dowladeed oo shaqeynaya. Tan waxaa ka mid ah kormeerida xarumaha maaliyadeed sida bangiyada iyo meel marinta sharciyada ka dhanka ah lacagaha been abuurka ah iyo maalgelinta waxa loogu yeero argagixisada.